Ciidamada NISA oo soo afjaray howl galkii Hotelka Ambassador – STAR FM SOMALIA
Ciidamada NISA ayaa goor dhow oo saaka ah soo afjaray howl galkii ka socday Hotelka Ambassador, halkaasoo shalay galab Al-Shabaab ay weerareen, iyadoo howl galka ka socday hotelka uu qaatay in ka badan 10-saac.
Ciidamada ayaa toogtay dhamaan dableydii hubeysneyd ee hotelka weeraray, kuwaasoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan tiradooda, hase ahaatee ciidamada howl galka waday ay sheegayaan inay ahaayeen saddex ruux.
Dadweynaha ayaa looga digay in aysan u dhowaan Gaari yaal banaanka hotelka oo laga cabsi qabo inay qaraxyo saaran yihiin, waxaana sidoo kale wadada laamiga daadsan illaa tobaneeyo gaari oo bur burtay.
Ciidamada ayaa xalay soo bad baadiyay dad badan oo ay ku jiraan Xildhibaan iyo Mas’uuliyiin, sidoo kale xaalada Hotelka ayaa aheyd mid adkeyd, waxaana howl galka dheereeyay korontada oo go’neyd, gudaha hotelkana uu ahaa mugdi.
Dadka ku dhintay weerarka hotelka ayaa waxaa ku jira C/xamiid Sheekh C/qaadir oo la dhashay Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir.
Hotelka Ambassador oo ka kooban shan dabaq ayaa qeybaha dhinaca laamiga xiga ayaa waxaa ka muuqda bur bur xoogan.
Weerarka Hotel Ambassador ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay Isbitaalka Daar-Shifa oo ku dhegan, kaasoo bur bur soo gaaray, isla markaana dhaawacyadii isbitaalka ku jiray laga daad-gureeyay.
Waa weerarkii labaad ee sanadkan ugu dhimashada badnaa oo hal goob ah ka dhaca, kadib weerarkii Xeebta Liido ee dhacay 21-kii Janaayo ee sanadkan, kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 30-ruux.